Qalabka Cidiyaha Deji, Kareemka Wejiga, Toner Wajiga - Wangtong
Tianjin Wangtong Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd. Warshadaha Qurxinta Lifen
Tianjin Wangtong Warshadaha iyo Ganacsiga Lifen warshad la isku qurxiyo ayaa la dhisay 1998, waxay in ka badan 20 sano khibrad u leeyihiin soo saarista waxyaabaha la isku qurxiyo ee gudaha. Waxaan leenahay taariikh dheer oo ah ganacsiga OEM / ODM Hadafkeenu waa in aan u oggolaanno macaamiisheenna in ay istcimaalaan waxyaabaha la isku qurxiyo.
Noocyo kaladuwan oo noocyo kala duwan ah oo saameyn ku leh alaabada daryeelka maqaarka ayaa isku dayay inbadan, runta u sheeg calaamadda oo leh faraq aad u fog qiimaha sidoo kale ma lahan saameyn muuqata oo kala duwan. Haddii aan kugula talin lahaa kaliya hal shey oo daryeelka maqaarka ah, waxaan kugula talin lahaa subagga Shea la'aanteed ...
Sida ay u shaqeyso: Badeecadani waxay ku shaqaysaa adoo gubaya baruurta, hagaajinta dhiiga, kordhinta jilicsanaanta. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Camellia Sinensis Caleen Extract, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, Mentholum Sida loo isticmaalo: Natiijooyinka ugu wanaagsan ap ...
Tianjin Wangtong Warshadaha Iyo Ganacsiga Co., Ltd.
Warshadaha Tianjin Wangtong Iyo Ganacsiga Co., Ltd. Lifen Cosmetics Factory waxaa la dhisay 1998, waxay leeyihiin in ka badan 20 sano oo khibrad ah soo saarista waxyaabaha la isku qurxiyo, waxaan sameynaa alaabada OEM / ODM oo waxaan leenahay sumad noo gaar ah oo loo yaqaan 'SIMU' oo ah aagga daryeelka maqaarka. Si loo xaliyo tafaariiqleyda yar yar ee doonaya inay keydiyaan qarashka oo ay ...